ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ်းစာမှာ ဘာတွေကြိုပြောထားသလဲ | ကျမ်းစာ အဖြေများ | NWT
ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ်းစာမှာ ဘာတွေကြိုပြောထားသလဲ
“လူ​တစ်​မျိုး​နဲ့ တစ်​မျိုး၊ တစ်​နိုင်​ငံ​နဲ့ တစ်​နိုင်​ငံ တိုက်​ခိုက်​ကြ​လိမ့်​မယ်။ . . . အဲ​ဒါ​တွေ​အားလုံး​ဟာ ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခရဲ့ အစ​ပဲ။”
မဿဲ ၂၄:၇၊ ၈
“ပရော​ဖက်​အတု​အယောင် အများ​ကြီး ပေါ်​လာ​ပြီး လူ​တွေ​ကို လှည့်​ဖြား​လိမ့်မယ်။ မတ​ရား​မှု​တွေ များ​သည်​ထက် များ​လာ​တဲ့​အတွက် လူ​အတော်​များ​များ​ဟာ မေတ္တာ​တ​ရား ခေါင်း​ပါး​လာ​လိမ့်​မယ်။”
မဿဲ ၂၄:၁၁၊ ၁၂
“ရပ်​နီး​ရပ်​ဝေး​က စစ်​မက်​သတင်း​တွေ​ကို ခင်​ဗျား​တို့ ကြား​ရ​လိမ့်​မယ်။ အဲဒီ​အခါ ထိတ်​ထိတ်​ပျာ​ပျာ မဖြစ်​ကြ​ပါ​နဲ့။ အဲ​ဒါ​တွေ ဖြစ်​ကို​ဖြစ်​လာ​မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆုံး​တော့ မရောက်​သေး​ဘူး။”
“င​လျင်​တွေ အကြီး​အကျယ် လှုပ်​လိမ့်​မယ်။ အစာ​ခေါင်း​ပါး​မှု​တွေ၊ ကပ်ရောဂါ​ဘေး​တွေ တစ်​နေ​ရာ​ပြီး တစ်​နေ​ရာ ဖြစ်​လိမ့်​မယ်။ ကြောက်​လန့်​စရာ မြင်​ကွင်း​တွေ မြင်​ရ​လိမ့်​မယ်။ ကောင်း​ကင်​မှာ လက္ခ​ဏာတွေ ပေါ်​လာ​တာ​ကို ရှင်း​ရှင်း​လင်း​လင်း မြင်​ရ​လိမ့်​မယ်။”
“နောက်ဆုံး​ကာလ​ဟာ အလွန် ခက်ခဲ​ကျပ်​တည်း​မယ်​ဆို​တာ သိထား​ပါ။ ဘာ​လို့​လဲ​ဆို​တော့ လူတွေ​ဟာ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယ်​ပဲ ချစ်​တဲ့​သူ၊ ငွေ​ကို​တပ်​မက်​သူ၊ ဝါ​ကြွား​သူ၊ မောက်မာ​သူ၊ ဘု​ရား​ကို စော်​ကား​ပြော​ဆို​သူ၊ မိ​ဘ​စကား နားမ​ထောင်​သူ၊ ကျေး​ဇူး​ကန်း​သူ၊ သစ္စာ​မရှိ​သူ၊ ချစ်​ခင်​တွယ်​တာ​စိတ် မရှိ​သူ၊ ညှိ​နှိုင်း​လို့​မရ​သူ၊ သွား​ပုပ်​လေ​လွင့်​ပြော​သူ၊ မချုပ်​တည်း​နိုင်​သူ၊ ကြမ်း​ကြုတ်​သူ၊ ကောင်းမြတ် ရာ​ကို မုန်း​တီး​သူ၊ သစ္စာ​ဖောက်​သူ၊ တဇောက်​ကန်း​နိုင်​သူ၊ မာ​န​ထောင်​လွှား​သူ၊ ဘု​ရား​သခင်​ကို မချစ်​ဘဲ အပျော်​အပါး​ကိုသာ နှစ်​သက်​သူ၊ ဘု​ရား​တ​ရား ကြည်​ညို​ဟန်​ ရှိ​ပေမဲ့ တ​ရား​ကို လက်​တွေ့​မကျင့်​သူ​တွေ ဖြစ်​ကြ​လိမ့်​မယ်။”
၂ တိမောသေ ၃:၁-၅
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ်းစာမှာ ဘာတွေကြိုပြောထားသလဲ
nwt စာ. ၁၆-၁၇